Jilayaasha Game of Thrones ee nooca GTA | Abuurista khadka tooska ah
Melissa Perrotta | | Fanaaniin, muujiye, Dhiirrigelinta
Nashqadeeyaha farshaxanka Faransiiska ku saleysan ee Tokyo, Mike Wrobler wuxuu dib u soo nooleeyay jilayaasha taxanaha caanka ah "Game of Thrones". Sidan oo kale, wuxuu doonayay inuu qaato astaamaha Grand video Auto video game sida midabada la maydhay, hooska calaamadeysan iyo midab aad u qaas ah. Dhinaca kale, waxay qaadataa muujinta caadiga ah ee dabeecad kasta iyo gaadiidka ilaa 80-naadkii oo leh dhar aad u gaar ah waqtigaas.
Xaqiiqdii, qaabka uu soo bandhigay farshaxanku wuxuu siinayaa aragti ka duwan tan aan haysano markaan aragno jilayaasha dharkooda caadiga ah. Hadda qaansooyinka, masduulaagayaasha iyo seefaha waxaa beddelay rogayaasha, cuntada, walxaha iyo dharka casriga ah. Maqaalka waxaad ku arki doontaa Bandhigyada qaab kooxeedka taasi waxay Daenerys ka dhigeysaa boqoradda meerkadaha, Jon Snow seeftiisa wuu luminayaa, xitaa Jeoffrey wuxuu umuuqdaa mid ka xun sidii hore.
Dhiirrigelinta Wrobel waxay ka timid meelo kala duwan. Farshaxaniste wuxuu ku koray daawashada taxanaha sida "The X Files", isagoo akhrinaya majaladaha filimka naxdinta leh. Wuxuu sidoo kale waxyi ka qaatay dhismooyinkii uu ku sameeyay legos markii uu yaraa.
Gabagabadii, mashruucani wuxuu horeyba ujiraa dhowr sano waxay naga dhigeysaa inaan ka fikirno fursadaha kale markaad go'aansaneysid fikradda filim muuqaal ah. Taxanaha sidee ahaan lahaa haddii uu qaadan lahaa qaabka ciyaarta fiidiyowga? Waan ognahay in tirada dadka waaweyn ee daawanaya taxanaha nooca sawirka ay sii kordhayaan. Si kastaba ha noqotee, waxay ku sii jiraan meel aad u yar oo dhagaystayaasha ah. Halka maanta softiweerka naqshadeynta dabeecadaha cusub iyo aaladaha cayaartoyda ayaa kordhiyay awoodaha; hubaal taxanaha ugu xiisaha badnaa ee muddooyinkan dambe waa la iska indha tiri lahaa haddii uu sawiray Wrobel, laakiin waa inaan aqbalnaa in qaabkiisa GTA uu yahay mid cajiib ah.
6 Ramsay Baraf
7 Robb Stark iyo Talisa
8 Walkerka cad
9 Farta yar
Robb Stark iyo Talisa
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Jilayaasha Game of Thrones ee nooca GTA
Abuur saamaynta teeb-gareynta filimka cusub ee STAR WARS